Basikety - All Star du Président : Lavo ny Rosianina, lasan’i Madagasikara ny amboara -
AccueilRaharaham-pirenenaBasikety – All Star du Président : Lavo ny Rosianina, lasan’i Madagasikara ny amboara
21/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niady ny fihaonana. Norombahin’i Madagasikara ny amboaran’ny fiadiana ny « All Star du Président 2018 » teo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy, nikatrohana tamin’ny ekipa rosianina, Les Armées de la Neva avy any Saint-Petersbourg, omaly, tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Lavon’ireo kintan’ny basikety malagasy tamin’ny isa tery 74 noho 73 ry zareo Rosianina tamin’izany. Eny, fa na nitarika tamin’ny isa hatrany aza ny Les Armées de la Neva tao anatin’ny ampahefa-potoana telo voalohany. Tany amin’ny ampahefa-potoana fahefatra farany kosa, nanenjika sady niady ry Tanjona sy Elly ary Fabrice sy Ibrahim sy ny namany, ka nahazoana ny fandresena nanoloana an-dry Denis sy Timur ary Igor sy ny namany avy amin’i Rosia. Hita tamin’izany fa nanjakan’ny “fair-play” tanteraka iny lalao iraisam-pirenena efa nandrasan’ny mpankafy basikety iny.
Tetsy andaniny, teo amin’ny fiadiana ny “Super Coupe du Président” sokajy vehivavy N1A, indray, norombahin’ny SBBC avy any Boeny ny amboara miaraka amin’ny vola mitentina 4 tapitrisa Ar avy amin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina rehefa nandavo ny MB2ALL Analamanga tamin’ny isa 52 noho 42.